CTO ဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone အတိုကောက်
Martech Zone » အတိုကောက် » အတိုကောက်အားဖြင့် T	» CTO
CTO သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်.
နည်းပညာအရာရှိချုပ်၊ နည်းပညာအရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် နည်းပညာပညာရှင် အကြီးအကဲသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း နည်းပညာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် မျှော်မှန်းချက်အပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အမှုဆောင်အဆင့်ရာထူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတာဝန်ကို CIO ဟုခေါ်သည်။
CTO သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ဖွင့်ရန် နှိပ်ပါ။.
ကလစ်နှိပ်ရန်-ဖွင့်နှုန်းသည် ပေးပို့ထားသောအီးမေးလ်အရေအတွက်ထက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အီးမေးလ်အရေအတွက်ထက် ကလစ်နှိပ်မှုအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤကလစ်များသည် သင့်အီးမေးလ်ကို အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုဖူးသူများသာဖြစ်သောကြောင့် ဤကလစ်များသည် သင့်ပရိသတ်ထံ ဒီဇိုင်းနှင့် စာတိုပေးပို့မှုအပေါ် တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါသည်။ နောက်ထပ်အတိုကောက်ကတော့ CTOR.